खुल्यो सुपरस्टार सलमान खानका अहिलेसम्म कसैलाई थाहा नपाएका ५ रहस्य | Tungoon
खुल्यो सुपरस्टार सलमान खानका अहिलेसम्म कसैलाई थाहा नपाएका ५ रहस्य
काठमाडौं । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका विश्वभरी करोडौंको संख्यामा सर्मथक रहेका छन् । उनका बारेमा जान्ने इच्छा हुनु स्वभाविक पनि हो । उनी उमेरले पचास काट्दा पनि कसरी अहिलेसम्म विवाह नगरी बसेका छन् ।
उनको बानी व्यवहार देखि लिएर हरेक कुराहरुमा धेरैंको चासो हुन्छ । आज हामी खानका बारेमा पछिल्लो समय खुलेका अहिलेसम्म अरुले थाहा नपाएका केही पाँच रहस्यमय कुराहरु लिएर आएका छौं । आउँनुहोस् जानौं सलमान खानका पाँच अलग्गै खालका कुराहरुको बारेमा।।।
सस्तो कपडाः स्टार भए पनि सलमान खान पहिरनमा खास ध्यान दिँदैनन् । उनी सस्ता कपडा किन्छन् । कहिलेकाहीँ ५ सय भारुको टिसर्ट लगाएर पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन्छन् । उनी पुराना कपडा हत्तपत्त फाल्दैनन् । उनी १५ वर्ष पुरानो जिन्स र १० वर्ष पुरानो जुत्ता लगाएर पनि फिल्म प्रमोसनमा हिँडेका छन् ।
सही विश्लेषणः उनको सफलता कुनै संयोग होइन । आफ्नो फिल्म कतिसम्म सफल हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न उनी खप्पिस छन् । उनको यस्तो कलाले नजिकका साथीभाइ पनि आश्चर्यमा पर्छन् । यसको उदाहरण ‘बजरंगी भाइजान’लाई लिँदा हुन्छ । यो फिल्मको प्रस्ताव आउँदा सलमान अन्य ठूला प्रोजेक्टमा व्यस्त थिए । तर, स्क्रिप्ट पढेपछि उनी यति कन्भिन्स भए कि, सबै काम छाडेर ‘बजरंगी भाइजान’ खेले । परिणाम सबैलाई थाहा छ । यो उनको करिअरको सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने फिल्म हो ।
पैसा जलाउनेः बाल्यकालमा उनी दीपावली मज्जाले मनाउँथे । पटाका पड्काउनुको सट्टा सलमानले पैसा जलाउने गरेका थिए । एकपटक उनले दीपावलीमा आफ्ना पिता सलिम खानको पूरै महिनाको तलब जलाइदिए । बलिउडका चर्चित स्क्रिप्ट राइटर सलिमले उनलाई पिटेनन्, तर पैसाको महत्व बुझाए । सलमानका अनुसार पिताको उक्त भनाइ आजसम्म पनि उनको मस्तिष्कमा गढेको छ ।
साबुन प्रेमः सलमान साबुनप्रेमी हुन् । उनी प्रायः अग्र्यानिक साबुन प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । उनको स्नानकक्षमा धेरै ब्रान्डका साबुन छन् । उनी जुन देश घुम्छन्, त्यहाँबाट साबुन किनेर मात्रै फर्कन्छन् ।
प्रविधिमा पछाडिः सलमान प्रविधिमैत्री छैनन् । उनले अहिलेसम्म आफ्नो इमेल आइडी पनि खोलेका छैनन् । फोनमा भन्दा प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्न रुचाउँछन् । न उनीसँग आइप्याड छ, न त प्ले स्टेसन नै । रोचक कुरा यो छ कि, उनलाई बजरंगी भाइजानमा समावेश गीत ‘सेल्फी ले ले” सुटिङ हुनुअघि सेल्फी शब्द नै थाहा थिएन । एजेन्सी
Previousअस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको बिचल्ली, जिम्मेवार को ?
Nextभ्रष्टाचारका अनेक रूप: आफूखुसी खरिदले राज्यलाई करोडौं घाटा, ठेकेदार मालामाल
जापानमा एउटा टुना माछा रु. ३४ करोड ७२ लाखमा बिक्री
एउटै माछा ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा बिक्रि
यस्ता छन् अमला सेवन गर्नुका अचुक ७फाइदाहरु
Sep 20, 2020 | स्वास्थ्य
त्रिशुलीमा ट्रयाङकर दुर्घटना, यसरी बचाए चालकले ज्यान
Sep 20, 2020 | समाचार
(नेकपा)को सचिवालय बैठक पहिलो पटक पेरिसडाँडामा
Sep 20, 2020 | मुख्य समाचार, समाचार
फुलमाया लो बचाउ अभियान शुरु-सके सहयोग गरौं सक्दैन सेयर गरेर सहयोगि हात सम्म पुर्याईदिउ
Sep 19, 2020 | मुख्य समाचार
कुलमान घिसिङ्गलाई नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित काठमाडौंको माइतिघरमा प्रदर्श
Sep 16, 2020 | समाचार
सिन्धुपाल्चोक केन्द्र भएर ६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प